Aguilera, Christina, Christina Aguilera, qaawan, heesaha
Christina Maria Aguilera(* 18 Diisembar 1980, Staten Island, New York) waa fanaanad caan ah oo Maraykan ah.
Waxay qandaraas la gashay RCA Records ka dib markii la duubay heesoMilicsifilimkaMulan. Albaabkeeda ugu horeeyayChristina Aguilera(1999) uu guul la dadweynaha iyo dhaleecayn iyo xataa 2000 iyada album kasbadeen Grammy ee Best New Artist. Soon sii daayay album Latino-popMi Reflejo, taas oo ay ku guuleysatey 2001 Latin Grammy loogu talagalay albaabka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'pop pop album' iyo sidoo kale albaabka kirismaskaNooca Kirismaskaiyo labada buuggan ayaa si fiican u iibiyay.
2002 ayaa sii daatay albaabkeeda labaad ee studiofurteen, taas oo ay ahayd mid hal abuur leh. Dhaleeceeynta heshay kala duwan iyo Christina isaga heshay, waayo Grammy kale, laakiin iyada image-hehiisiinta galmada ee horumarinta album this noqday mawduuca dhaleeceyn aad u daran iyo jees jeesi jireen. Sheekadiisa saddexaad ee studioBack to Basics(2006) wuxuu ka kooban yahay xubno nafeed, jaceylka jazzua. Waxay si fiican u iibisay oo waxay heshay dhaleeceyn wanaagsan waxayna bixisay Aguilera oo leh laba magac oo Grammy.
Bilowga Caruurnimada iyo Xirfadda Shaqooyinka
Aguilera wuxuu ku dhashay Island Staten, New York, aabaheedFausto Wagner Xavier Aguilera, Qareenka Maraykanka iyo hooyadiisShelly Loraine Fidler. Aguileřin aabbihiis waa ka soo jeedo Latin, ayuu waxa uu ku dhashay Guayaquil, Ecuador, halka hooyadeed waa Canadian la German, English, isirka Irish iyo deenishka. Christine's waalidiinta waxay la kulmeen markii aabbaheed uu u adeegaySaldhigga Harmon Air Force Base(Airbase) ee Stephenville, Newfoundland, Canada.
Waalidiinteed waxay guursatay hooyadeed 20 sanado iyo aabaheed 31. Aguilera iyo waalidkeed waxay ku noolaayeen sannadihii 6 ama 7. Markii ay waalidkeed is-furtay, hooyadeed waxay qabatay iyada iyo walaasheed Rachel gurigeeda ayeeyeed ee Rochester, Pennsylvania, xaafad shaqo oo ku taal Pittsburgh. Sida laga soo xigtay Aguilera iyo hooyadeed, Aabbaha Fausto wuxuu ahaa nin xag jirka ah oo dareen ahaan aad u qallafsan, wuxuu ka muuqday heesaheeda "Waan fiicanahay" iyo "Oh Mother". Hooyo Shelly ka dib waxay qaadatay xirfadle caafimaadJim Kearnswaxayna magaceeda ku beddeshay Shelly Kearns.
Abbaaraha afar iyo tobnaad Christina waxay ku diiwaangashey iyada koowaadAll I Wanna Do, oo ah gabdhi kudhashay Jabiz Nakashim.
Markii ugu horraysay ee la ogaado awoodda codka ee Masiixa waa awoowe. Christina waxay jeceshahay inay noqoto fanaan. Iyadoo ilmo ay ka qabatay munaasabado kala duwan oo ka qayb qaatay tartanno tayo-dhalineed oo yar yar, halkaas oo ay inta badan ku guuleystey. Waxay si dhakhso ah u soo jiidatay dareenka warbaahinta waxaana loo yaqaano sidagabar yar oo leh cod weyn.
Sida laga soo xigtay bandhiggadeganiVH1 ayaa sii xumaatay qoraalkan. Marka ay tartamayaashu ogaanayaan in ay ka hor tagi lahaayeen, waxay isla markiiba taageeraan, sababtoo ah ma aysan helin fursad ay ka hor jeedaan. facooda Her waxaa ugu dhaqsaha badan waxay bilaabeen inay noqon masayr ah, oo waxay noqdeen wax la quudhsado ah iyo xitaa in hal fasal gym isku dayeen in ay weeraraan iyada. Sidoo kale, tusaale ahaan, qof ayaa xayiray taayirada baabuurka qoyska. Qoyska ayaa xitaa u dhaqaaqay arrintan, waxaana amar ku siiyay Christinin taliyayaasheeda inay aamusnayd si looga hortago weerar kale oo suurtagal ah.
15. March 1990 ayaa ka muuqday tartankaRaadin Staroo leh heesNooca Axadda ee Jacaylkaby Etty James, laakiin ma aysan guuleysan. Wax yar ka dib markii ay lumisay tartankan waxa ay ka muuqatay KDKA-TV bandhiggaLa soo qaado Larry Richertoo wuxuu la baxay gabaygii. Dadku waxay xuseen in "sanadka 10-jirku uu u eg yahay 20-jir."
Intii uu carruurnimada ee Pittsburgh, iyadu way gabyeen The Banner Star-Spangled (American Heesta) ka hor kulan Pittsburgh pingvin (kooxda xeegada) Pittsburgh Steelers (kubada cagta American) iyo Pittsburgh Pirates (baseball). doorka ugu weyn Her yimid markii ay heshay si ay u muujiyaan "The New Mickey Mouse Club." qaab kale ee show this ahaayeen, tusaale ahaan, Britney Spears, Justin Timberlake, JC Chavez, Rhona Bennett (kuwaas oo markii dambe u noqday xubin ka mid ah En Vogue), Ryan Gosling iyo Keri Russell. sida uu sheegay dukumintigadeganishaqaalaheeda ayaa loogu yeeray diva.
Mid ka mid ah bandhigyada ugu caansan ayaa ahaa, tusaale ahaan, markii ay heesayWaxba ma haystoby Whitney Houston. Marka show ku dhamaatay 1994, Christina bilaabay si ay u qoraan goodhiyaha kala duwan, ayaa rajeynaya inuu u saxiixo heshiis lagu qoro shirkadda rikoor ah.
1997 ayaa wakiil ka ah xafladaha caalamiga ahGolden Staroo leh laba heeso - hal Sheryl Crow iyo kan kale ee Diana Ross.
In1998ee musqusha waxay u heestay Run To You by Whitney Houston waxayna ku duubtay cajalad. E3 ayaa ku dhufatay qaladaadkan. Kadibna waxaa loo doortay in ay heeso heesaha sheekada ee 'Disney's' Mulan '(1998). Iyadoo la duubay heesadaan, waxay heshay heshiis rikoor ah RCA Records, oo dhan hal toddobaad gudahood.Milicsi gaadhay sare ee shaxda boor 20 oo waxaa u sharaxan Golden Globe ah Best Original Song. Christina Aguilera ee album ugu horeeyay ee la sii daayey ee 24. August 1999. Gaadhay sare ee boor 200 iyo gooldhalinta Canadian la suuq 8 million unugyada ee Maraykanka ee 14 million koobi dunida oo dhan.
Her hal Converter in Dhalo ah, maxay Girl ah uu rabo ama u Kaalaya badan Baby (All Waxaan doonaysaa inaad Ma) ahaayeen ugu horeysay boor Hot 100 sanadihii la soo dhaafay 1999 2000 iyo hal baan u leexo Waxaad ahaa saddexaad. Aguilera guuleystay Grammy ee Best New Artist iyo Best Female Vocal Performance (for gabaygii Converter In Dhalada A). Sida laga soo xigtay qorayaasha, kuwaas oo ka qayb qaatay album iyo muuqday documentdeganiChristina rabay si ay u muujiyaan baaxadda iyo dhiiran codkiisa inta lagu guda jiro horumarinta ah album iyo heeso ay ku heesayeen for raacidda iyo television loomana baahno shows weheliyay iyada biyaano oo kaliya. Waxaa dhammeeyey sannaddii ee showGaarka ah ee Sannadka Cusubon MTV iyo sidoo kale ahaa kii ugu horeeyay ee Milyanjeerkan MTV.
Marxaladda 2000, Christina markii ugu horaysay waxay asal ahaan ka soo jeedaa Latin America waxayna raacday habka 12 ee habka loo yaqaan 'pop-pop'. Sebtember 2000 ee ugu horeeyay ee Spanish ah, Mi Reflejo. Albaankani wuxuu ku jiraa qaybaha Isbaanishka ee heesaha laga bilaabo markii ugu horeysay.
Ka soo horjeeda 27. Billboard 200 iyo 1. ee jaantuska Latino. Christina ayaa ku guuleystay abaalmarinta Latino Grammy Award at 2001 ee loogu talagalay gabdhaha ugu fiican ee gabdhaha. Guud ahaan, albumkan wuxuu iibiyay 2,1 malaayiin qaybood oo adduunka oo dhan ah waxayna ku guuleysteen lakab dahab ah iyo seddex platinum ee Maraykanka. Waxay sidoo kale ku guuleysatay abaalmarintaMusic Award Adduunkaoo ah fanaanka ugu wanaagsan ee iibiya. Singles Falsas Esperanzas oo ka timid buugan ayaa tagay 40 ee Argentina.
Christina ayaa sidoo kale sii daayay CD-da Christmas 24. Oktoobar 2000, oo loo yaqaan 'My Kind of Christmas'. Waxay gaartay 28. Halkii loo bedeli lahaa Billboard 200, 1,3 waxaa loo iibiyey malaayiin gogo 'iyo rikoodhka platinum ee Maraykanka. Ricky Martin ayaa waydiistay Christina inuu qoro dukaanka Qofna ma doonayo inuu kaligiis ka noqdo albaabkiisaQalabka Codka. Hal ayaa lagu sii daayay 2001 oo ah tan labaad ee ka timid albaabkan. In ka UK iyo Germany uu galay TOP 5, ee USA ee 20 Top iyo Switzerland, Kanada iyo Australia ay u TOP 40.
In Christina 2001 ah oo ay la socdaan Lil 'Kim, myOU iyo P! NK doortay in remake Patti LaBelle ku dhacay ee sannadka 1975 Lady Pomelos for soundtrack ah in filimka Moulin Rouge!'. Lady Pomelos hadhay on top of gooldhalinta shantii toddobaad iyo dalalka kale 11 sidoo kale gaadhay sare ee shaxanada iyo nimankii gabayaaga ahaa oo dhan kasbaday Grammy ah ugu wanaagsan pop iskaashi vocal.
Sanadkaas, albaabka waxaa loo sii daayay dukaamadaJust Free Free, mid ka mid ah rikoodhada sawirada ee Christina ayaa la duubay markii ay jirtay 15 sanado badan. Markii la ogaaday shirkadeeda diiwaanka, RCA Records, waxay si rasmi ah ugu talisay taageerayaasha inaysan ka iibsan kan keliya, iyo Jarmalka waxaa si buuxda looga saaray.
Dhowr bilood ka dib, waxay doonaysay shirkad duubis ahDiiwaanka Warlocksii daayo Just Be Free, album oo ay ku jiraan diiwaan gelinta demo kale. Chrstina waxay dacwad ku soo oogtay shirkaddan si ay u jebiso qandaraaska iyo ka soo horjeeda soo saarayaasha albaabkan si looga hortago sii deynta albumka. Ugu dambeyn, labada dhinacba waxay ku heshiiyeen inay sii daayaan albaabkan. Aguilera waxay magaceeda u bixisay, qaabeyn iyo sawir aan wax khasaare ah soo gaarin. Faahfaahin badan oo ka mid ah dacwadda ayaa ah mid qarsoodi ah. Albaabka waxaa lagu sii daayay 2001 waxaana soo bandhigay Christina 15-jir.
Inkastoo Christina's debut album uu ahaa mid aad u guuleysatay, ma aysan ku faraxsaneyn muusigga iyo sawirka ay u abuurtay iyada. Waqtigaas, qaabka muusikada ee Christinin ayaa loo tixgeliyey in ay tahay bubblegum pop, qaab cajiib ah wakhtigaas. Si kastaba ha ahaatee, Christina ayaa si cad u xasuusiyay in ay rabto in albumkeeda soo socota ay ahaato mid qoto dheer, muusig iyo heeso. Saameynta Steve Kurtz (maareeyaheeda) ayaa aad u weyneyd iyada, iyada oo kaashaneysa dhamaan tallaabooyinkeeda ka baxsan xadka heshiiska.
Bishii Oktoobar 2000 waxay dacwad ka dhan ah Kurtz u gudbisay saameyn aan habboonayn, aan habboonayn oo aan saameyn ku lahayn hawlaheeda xirfadeed iyo weliba khiyaamo. Sida laga soo xigtay dukumiintiyada sharciga ah, ma uusan daneeynin xuquuqdiisa iyo danihiisa, halkii ay waxtarka u lahayd isaga. Tallaabadan waxaa la keenay markii uu Masiixa ogaaday in ay qaadatay dakhligeeda ka badan intii loo ogolaaday, lacagtana waxaa bixiyay kaaliyayaashii kale si ay isaga caawiyaan. Waxay kaloo waydiisatayGuddiga Shaqaalaha ee Californiain heshiiska la joojiyo. Ka dib markii uu Kurz u bixiyay markhaati, waxay u kiraysatay Irving Azoff oo ah maamulaha cusub. Isbedelkan maamulka ayaa ahaa isbeddel wayn, gaar ahaan muusikada uu sii waday.
Kurtz, isla bishaas, waxay dib u bixisay dacwadeeda, waxayna dacwad ku soo oogtay jebinta qandaraaskeeda oo ay ku xukuntay nafteeda. Waxa uu ku sheegay dacwadda in dadka ku dhow Masiixa ay isku dayeen in ay carqaladeeyaan xidhiidhkooda ganacsiga waxayna sidoo kale ku eedeeyeen Azoff.
Christina inta lagu jiro safarkafurteen
29. Oktoobar 2002, kadib dib-u-dhac dheer, ayaa sii daayay albaabada labaad ee studio ee Ingiriis oo la yiraahdo Stripped.
Toddobaadkii ugu horreeyay 330 ayaa isaga iibiyay kun oo gogo 'oo ku xigay shaxda Billboard 200. Inta badan CD-yada ayaa sidoo kale soo bandhigay Christina, oo saxeexay sawir uu leeyahay BMG on albumkan. Albaankani wuxuu saameyn ku yeeshay qaababka badan: rn'b, gaal, nafta, ballad, pop, dhagax, hip hop iyo jazz. Dhaleeceynta intooda badan ma aysan qaadin albaabkan iyo sidoo kale markii ugu horeysay, iyo codka Christin ee codkeedii ayaa la iska indho tiray iyada oo ay bilaabeen inay dhisto sawir jinsi ah. Ka dib markii la sii daayay albumka, waxaa lagu sawiray wargeysyada sidaMaxim, Rolling Stone a CosmoGirl!. Inta badan sawiradaasi waa qaawan ama qayb ahaan qaawan. Waxay diidday inay rabto inay soo jiidato isbeddelkan, sida ay sheegtey, muuqaalkani waxa uu ka fiicnayd shakhsigii hore. Waxay bilowday inay ku magacowdo isbeddelkeedaXtinawaxaana loo maleynayay in ay tahay geeskeeda madow.
Ugu horreyntii, sawirkani wuxuu saameyn xun ku yeeshay xirfaddiisa, gaar ahaan ka dib markii la sii daayay koodhka Dirrty. MTV, gabaygan ayaa noqday mid aad u weyn, iyada oo aan ka ciyaarin jadwalka Ameerika. Hase yeeshee, Dirrty wuxuu noqday mid caalami ah, waxaana uu ku yimid liiska ugu sareeya liiska wadamo badan. Albaabka wuxuu u tagay TOP 5 gudaha UK, USA iyo Canada. Midda labaad ee quruxda badan ee Beautifulbyl ayaa ku duuban raadiyaha. Ninka kale ee loo yaqaan 'Fighter', ma naga qaadi karaan Us Down (oo ay la wadaagaan Lil 'Kim) iyo Codka Voice waxaa la sii daayey labada sano ee soo socota, sidaas darteed Christina wuxuu hayaa jadwalka waqtiga. Sawirada albaabbada (ee Maraykanka iyo UK), Xadhigga ayaa sidoo kale wuxuu ahaa ilaa 2004 wuxuuna ahaa afar jeer platinum oo ku yaal Maraykanka waxaana uu ahaa tobanka tobnaad ee jaantuska guud ee sanadlaha ah (sida laga soo xigtay magazine Billboard).
Kelly Clarkson's Miss Independent waxaa qoray Christina waxayna ahayd markii ugu horeysay ee ay isku diyaariso albaabkeeda.
Alba Stripped ayaa dunida oo dhan ka iibisay 10 malaayiin gogo 'adduunka oo dhan taas oo macnaheedu yahay in qaybo ka mid ah lumis la'aanta Maraykanka, laakiin ay ka sii badan tahay qaybaha kale ee adduunka.
Bishii Juun, Christina wuxuu ku biiray Justin Timberlake oo booqasho ku maray Maraykanka. Waxay u yeedheen safarkan wadajirka ahXayiraadda Turjumaadda(magacyo albaab ah ee labada fanaan). Bishii Agoosto, qayb ka mid ah iftiiminta ee Atlantic City ayaa dhacayHallwalk Halloo sidaas daraadeed dhaawaca qayb ka mid ah qalabka. Sababtoo ah waxay dhacday uun ka hor bilawga bandhigga, tan iyo dhowr bandhigyo kale waa la joojiyay ama dib loo dhigay. Saddexdii bilood ee ugu dambeysay ee sanadka, Christina wuxuu socdaal ku tagay meel ka baxsan Maraykanka, laakiin horey u ahaan jiray. Sidan, mawduuca dalxiiska ayaa la jaray oo kaliyafurteen. Safarkan, Christina ayaa si adag u muujiyay, gaar ahaan qeybihiisa yurub, sababtoo ah America ayaa ah mid xushmad badan leh. Booqashadu waxay ahayd mid aad u guuleysey, inta badanna riwaayadaha ayaa la iibiyey. Akhristayaasha majaladdaRolling Stonesafarkan ayaa calaamad u ah sanadka ugu fiican. Christina waxay timaheeda midabkeedii midabkeedu ahaa madow.
Sanadka 2004, safar kale ayaa loo qorsheeyay in lagu sameeyo Chingy. Si kastaba ha ahaatee, safarka ayaa dib loo dhigay sababtoo ah Christina ayaa dhibaato ka haysatay xadhkaha dhawaaqa wax yar kahor intaan qorshaha bilaabmin. Laakiin xusuus qorka IngiriiskaThe Sunayaa sheegay in socdaalku la joojiyay sababtoo ah xiisaha hoose iyo la'aanta qalab cusub. Christina ayaa beenisay. Munaasabada MTV Video Music Awards, waxay ku samaysay Madonna, Britney Spears iyo Missy Elliot. Madonna waxaa lagu soo bandhigay sheeko madow iyo Hollywood ah, waxaana Christina ku dhunkaday Madonna, taas oo keentay fadeexad weyn.
Intii lagu jiray 2003, Christina sidoo kale waxa uu noqday wejiga Versace.
2004-2005: kala-guurka udhexeeya salka iyo dib u noqoshada
Bishii Janaayo 2004 ayaa daabacday majaladda Ingiriiska ee raggaZOOin Christina uu noqdo bisexual. Hal mar wareysi, ayay tiri: "Waxan ku faraxsanahay in aan dumarka ka eego ragga, Horumarin, waxaan jeclahay inaan tijaabiyo jinsiyadkeyga. Haddii ay macnaheedu tahay gabdhaha, u ogolow inay baxaan. " Waxay sidoo kale sheegtay in ay jecelyahay galmo aan caqli gal ahayn. "Waxaan qabaa jinsi aan ku xirneyn oo aan jeclahay galmo aan qasab ahayn. Laakiin taasi macnaheedu maaha inaan cagahayga wada ilaaliyo. "
Christina ayaa markaas go'aansaday in la geeyo sawir ka badan oo qaan gaar ah, taas oo iyadu aad u ammaantay.
Waxay ku qortay cinwaanka Hello ee loogu talagalay xayaysiiska Mercedes-Benz. Wax yar ka dib, waxay bilawday in ay ka shaqeyso qalab cusub oo midabkeedu yahay midabkeedii midabkeed, guntinta iyo soo dejinta sawirka Marilyn Monroe. Taageerayaal badan ayaa sheeganaya inay la wadaagaan xiddigo kale oo Hollywood ah (sida Dita Von Teese, Gwen Stefani iyo Ashley Judd) waxay keenayaan gabadha Hollywood-ga ee labaatan jir ah, saddex-geesood iyo labaatan.
Ka hor doorashadii madaxweynenimada ee soo socota ee 2004, Christina wuxuu ku biiray olole aan faa'iido doon ahaynNaftaada u sheegwaxayna u muuqatay in ay soo saaraan buug-gacmeedyo ay la socdaan sheekoAdiga oo keliya waad is-aamusi kartaa (Kaliya waad is-aamusi kartaa)Ololahaan waxaa loogu talagalay inuu soo jiito (ma ahan) oo keliya codbixiyayaasha dhallinyarada ah doorashooyinka. Christina waxaa lagu sawiray afkooda oo la xidho, kuwaas oo loola jeeday in ay matalaan ra'yi la'aan haddii aanad codeynin. Waxay u muuqatay in Oprah Winfrey show ay ka hadasho sida ay muhiim ugu tahay inay codeeyaan.
Dhammaadka xagaaga, 2004 ayaa sii daayay laba qof oo kali ah. Kii ugu horreeyey wuxuu ahaa Car Wash, oo ah heeso riwaayadeed ah Rose Royce. Missy Elliott ayaa lagu soo bandhigay gabaygan, tan kaliyana waxaa loo diiwaan geliyey heesaha 'The Shark Story'. Gabaygii labaad wuxuu sidoo kale ahaa dhedig, waqtigan la joogo ra'iisul wasaaraha Nelly waxaana lagu magacaabaa Tilt Ya Head Back. Labada lamaane ee Maraykanka ayaa ku dhacay ganacsi, laakiin way ka fiicnaayeen adduunka intiisa kale.
Muddo ka dib, DVD-kiisii ​​ugu horreeyay ee Christina ayaa soo baxayLoogu Dhaafay Live In UK, rikoodhkeeda ka socda xafladaheeda Great Britain. Bishii Disembar, waxay soo bandhigtay cadarXaad, laakiin kaliya iibsaday qaar ka mid ah wadamada yurub.
Christina ayaa iskaashi la sameysay fanaankii jazz Herbie Hancock oo ku saabsanaa dib u soo celinta heestii Leon RosselSong for You, kuwaas oo ay ku duubeen albaabka HancockFursadaha. Gabaygan, waxay heleen Magaca Grammy ee loogu talagalay heesaha ugu fiican ee Pop.
Christina ayaa ku soo laabtay geesaheeda Disney. Waxay bilawday dabaaldegga sannadguuradii 50aad ee DisneylandMarka aad rabto on Star. Waxay sidoo kale la shaqeysay Andrea Bocelli gabaygiiSomos Noviosee loogu talagalay albumkiisaAmore, oo la sii daayay bilowgii 2006. Waxay ku qabatay kubad samafal ahIsku mid ah xiddigaha(Waxay ahayd tallaabo ka dhan ah gaajo) ee Johannesburg, Koonfur Afrika dhammaadka sanadka 2005 oo ay la socdaan xiddigaha sida Diana Ross iyo Westlife ee November iyo sidoo kale kasoo muuqan onSanduuqa CarruurtaNelsona Madely.
2006-2008: Xilliga Aaladaha Dib-u-noqoshada iyo albumyada ugu badan ee hits
Ku noqo safarka aasaasiga ah
Bishii Maarso, 2006 waxay qandaraas la gashay Orange Mobile si ay u metelaan una hormariyaan telefoonada cusub ee Sony Ericsson Walkman ee guud ahaan Yurub. Iyadoo ay weheliyaan heesaha Elifsa ee Lubnaan iyo Cayaaraha Kuuriya Kuuriya, waxay ka muuqatay Pepsi Beverage. Spot ayaa lagu baahiyay 2006 inta lagu guda jiro Koobka Aduunka ee Kubadda Cagta.
Christina ayaa sidoo kale qaawisay joornaalka Maajo ee majaladda GQ. Marlene Dietrich waxaa loo waxyooday sawirkan. In arrintan, waxa kale oo uu ahaa wada hadal meesha ka asxaabteena Mariah Carey uu muujiyay sida uu uga xun: "Weligay ma u eegin inaadan i loola dhaqmo ... oo ilaa aan joogay xisbi, waxaana qabaa waxaa quruxsan cabbay iyo runtii ii sheegay wax Dulleeya. "Mariah ayaa sheegay in saxaafadda:" waa wax murugo leh in magacayga isticmaalaa oo arrinta jiidayo ka ee la soo dhaafay si uu u sameeyo laftiisa dheeraad ah la arki karo ".
Aguilera markaas yiri: "My ujeedka aan ahaa in la laayo iyo Mariah la hadal kasta waxaa laga soo saaray macnaha. . Aadka iyada ixtiraamaan "waardiye Christina ee, kuwaas oo u shaqayn jiray siddeed sannadood la Madonna oo lix sannadoodna la Jennifer Lopez, wuxuu yiri:" Kuwa kale waxa ay leeyihiin qaab ay ka badan oo ku saabsan show iyo lanooga, laakiin gabar this (Christina uu ula jeedo, dabcan) gabyi karaa ".
Christinino's saddexda studio album ee ku qoran luqadda Ingiriis Ku noqoshada asaasiga ah waxaa daabacay 15. Agoosto iyo toban iyo toban dal ayaa yimid meesha ugu horeysa. Heesaha hogaamiyaha ma aha Maya Qof kale ayaa ku guuleystay, dalka Mareykanka wuxuu ku qaatay lixaad iyo UK oo ku yaal TOP 3. Wargeyska Rolling Stone wuxuu ku qoray 18. ku qor liistada heesaha ugu fiican ee 2006. Christina wuxuu faahfaahin ka bixiyay munaasabaddan oo ah jimicsi, saddex-geesood iyo qiyaaso, taasoo macnaheedu yahay jazz, blues, nafta, laakiin taabashada casriga ah.
Waxaa ka mid ah soo saarayaasha albaabadan waxaa ka mid ah DJ Premier, Kwamé, Linda Perry iyo Mark Ronson. Mid ka mid ah hees, "FUSS," ayaa lagu qoray jawaabta dareenka u dhexeeya Christina iyo Scott Storch intii lagu jiray duubista albaabka qasmay. Midka labaad ee albaabbadaDib ugu noqoshada asaasiga ahwaa heesHurt. Waxa uu kaalinta afraad ka galay qiimeynta adduunka, marka hore ee Billboard's Billboard's Eurochart Singles Sales chart, iyo meesha sagaalaad ee Jaartarka Billboard.
Marka lagu daro kor u qaadida albumkeeda, Christina iyo P. Diddy waxay ka wada shaqeeyeen Song Tell Me, taas oo laga heli karo Albaabka Saxaafadda. Hal ayaa lagu sii daayay dayrta 2006. Waxa uu degay labaatan-garaam oo ah qoraallada Ingiriiska, ka dibna wuxuu u baxay siddeedaad todobaadkii.
2006 ayaa lagu dhawaaqay bishii SebtembarBaby Jane(sida Christina mararka qaarkood waxay tiraahdaa) Dib u noqoshadeeda dib u noqosho, oo leh 18 riwaayado ah oo Yurub ah, iyada oo 17 qaadaneyso meesha ugu horeysa. Nofeembar iyo 17 ugu dambeysay. Bishii December ee Prague. Marka laga soo tago qorshayaashooda asaasiga ah, waxay kaliya qabanqaabiyaan dalxiisyada kooxaha yaryar ee 20. Febraayo in Houston oo uur leh 5. May gudaha Florida.
Laakiin waxa uu ku adkeysanayaa inuu wali qaban qaabin doono safarka naadiyada.
Shan milyan oo nuqul ah oo loo yaqaan 'Back to the Basics 3,3 ayaa la iibiyey, oo ay ku jiraan 1,3 million oo Mareykanka ah.
Qeybta saddexaad ee ka timid buugan waa Candyman. 25 ayaa la duubay. Janaayo oo lagu sii daayay bandhigyada TV-ga intii lagu jiray Febraayo 2007.
Dhammaadkii Sebtembar, 2008 waxay ku dhufatay xarumaha teknoolojiyadda ee CzechHayso Gettin 'Better, oo ka hormartay albaabka magaca isla ee la sii daayay 7. Nofeembar 2008. Tani waa xulashada heesaha ugu fiican ee 1999 ilaa 2008. Waxaad ka heli doontaa kalabadhada sidaGenie Dhameyste, Muxuu Doonaa Inuu Doono?NeboFighter, Beautifulama ka dibMiyuu Lahayahay Kale Man, Candyman. Warar ayaa markaa ka hadlaya dadka kalifayaGenie 2.0, wuxuu leeyahay Gettin 'Better, Dynamite.
2010 - Maanta: Muuqaal Bionic, Varieté movie iyo jury oo ku jira tartanka Voice
Albaabka lixaad ee studio Bionic waxaa sii daayay 8. Juun 2010. Aguilera ayaa iskaashi la sameeyay Linda Perry, heesaa Ingiriisi ah MIA ama Risaalaha Maraykanka Nicki Minaj. AlbaabBionic, oo uu fannaanku ka tagay fiidkii illaa elektarooniga iyo muusiga qoob-ka-ciyaarka ah, ayaa ka helay soo dhaweyn kala duwan oo dadwaynaha ah. Iibsiga albaabka ayaa wali aan wax isbeddel ah lahayn, isagoo marka hore ka soo horjeeda kaalinta saddexaad ee US 110,000 15. Wax yar ka dib markii la sii daayay, fannaankii ayaa soo gabagabeeyay kor u qaadista albaabkii oo wuxuu joojiyay socdaalka xagaaga soo socda. Waxay sharraxday la'aanta waqtiga diyaarinta ee sabab la'aan. Album Bionic waa fanaankii ugu horeeyay ee xirfadeeda, taas oo iyadu aan helin magac ujeedka Grammy. Fannaankii ugu danbeeyay ayaa sheegay in mid ka mid ah waraysiyada: "Anigu aad ayaan ugu faraxsanahay albumka. Waxaan ku fiicnaynay dhiirrigelinta, laakiin natiijada waxay saameysey dhinacyo kale oo badan. Wax walbo ma joojinayso, laakiin waa ujeedo shaqo dheeraad ah. "2010. November XNUMX waxay heshay xiddiga Christina ee Hollywood Walk of Fame.
In November 2010 la sii daayay filimka vaudeville, halkaas oo Christina Aguilera kaalin hogaanka of Ali Rose gabar ganacsade kii helaa jacaylka iyo guusha kooxda burlesque Los Angeles.Filim lagu qurxiyo ayaa sidoo kale lagu toogtay filimka, kaas oo heestay sideed heeso oo guud ahaan ah.Aguilera, Cher iyo Stanley Tucci, Eric Dane, Kristen Bell iyo Cam Gigandet ayaa ka muuqday filimka.
Isagoo kaashanaya masraxa, Christina Aguilera iyo xaasiga ayaa sameeyayCastle Wallsiyada oo rikoorka Mareykanka ee Ti uu u leeyahay rikoorkiisaMaya Mercy. 6. Febraayo 2011 heesaha heesaha ah ee heesta Super Bowl. Hase yeeshee, waxay lahayd naqshad weyn oo ku saabsan waxqabadka iyada sababtoo ah waxay illowday ereyada gabayada. Dhacdadan kadib ayaa raali galisay barnaamijka CNN ee TV-ga.
Bishii Abriil, 2011 waxaa ku biiray Adam Levine, Cee Lo Greene, iyo Blake Shelton, oo ah gudoomiye ka tirsan Voice. Tartanka tartanka ee NBC wuxuu noqday mid degdeg ah isla markaana mid ka mid ah bandhigyada ugu daawaday.Aguilera ayaa qortay heesaha Musqusha Sida Jagger oo la socda kooxda Maroon 5, mid ka mid ah dambiyada Adam Levine. Song wuxuu ku soo barbaaray Billboard Hot Hot 100.
Bishii Maajo, 2011 Aguilera waxay ku dhawaaqday inay duubaysay albaab cusub oo la sii deyn karo marka la gaaro xilliga guga iyo xagaaga ee 2012.
9. November 2012 Christina waxay sii daysay albaabka 5 studio, oo magaceeda ku leh "Lotus". Christina ee ku yaala buuggan wuxuu qeexayaa waaya-aragnimadeeda iyo dareenkiisa labadii sano ee la soo dhaafay. Lotus waa (sida nafteeda ay tiraahdo) sida dib u dhiska! Laga soo bilaabo album waxay soo saartay tijaabo aad u guuleysata Your Body, kaas oo ahaa kiisii ​​ugu horeeyay ee Christinin si loo helo shahaadada VEVO. Labada kale ee xayeysiiska ah, ha ha ahaato jacayl iyo xaqqa kaliya, ma ahan kuwo guuleysta. Unknown halkaas oo kor u qaadida albaab kale oo la tuuray, sidaa darteed guushu ma iman ...